Soosaarayaasha & Alaabada Waraaqaha - Warshadda Waraaqaha Shiinaha
Warqad Gacmeed Lagu Tuuri Karo Sanduuqa Frieska Faransiiska
Cunnooyinka degdegga ah ayaa caan ka ah adduunka, oo ka mid ah cuntooyinka degdegga ah, shiilannada Faransiiska ayaa ah badeecada ugu badan ee la cuno maaddaama ay yihiin shey cunto dhadhan fiican leh. Si loo ilaaliyo macaankooda loona kordhiyo noloshooda, baahida loo qabo xalka adag ee xallinta baakadaha ayaa sii weynaanaya. Sanduuqyada shiilan ee shaqsiga ah oo si fiican loo qaabeeyey ee faransiiska ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin xalka ugu habboon ee ku habboon alaabada noocaas ah maadaama si gaar ah loo soo saaray si kor loogu qaado heerka ilaalinta ee alaabada cuntada sida shiilan. Waxay door muhiim ah ka ciyaarayaan soo jiidashada macaamiisha iyo kordhinta iibka iyo jiritaanka tafaariiqleyaasha.
Saanqaarka La tuuro ee Burger Box Sanduuqa
Kooxda Chunkai's Khaanadaha Guddiga Khaanadaha iyo Saxanno waa noocyo badan oo Badeecooyin u habboon Bay'adda (Eco). Waxaan sidoo kale bixinaa daabacaad khaas ah oo leh astaantaada inta badan alaabtayada. Adoo dooranaya badeecadayada noocan ah, waxaad tallaabo weyn u qaadeysaa adeegga cuntada ee waara iyada oo aan loo eegin haddii aad tahay dukaan kafeega ah, dukaan laga qaato, ganacsiga cuntada, maqaayad, xafiis ama shirkad weyn. Yaree raadadka kaarboonkaaga adoo dooranaya alaabtayada.
Xirmada Xirmada Warqadda Saxanka Bowl
Farsamada Gacanta Lagu Tuuri karo Soor Bowl waa koob la tuuro oo laga sameeyay warqad waxaana badanaa lagu dhajiyaa ama lagu dahaadhaa caag ama wax si looga ilaaliyo dareeraha inuu ka baxo ama ku qoydo warqada.Waxaa laga yaabaa inay ka sameysan tahay warqad dib loo warshadeeyay waxaana si weyn looga isticmaalaa adduunka oo dhan. Waxaan ku siin karnaa cabir kala duwan 4oz ilaa 30oz koob. Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa daabacaadda midabka ama gramka walxaha. Maxaa kale, waxaan sidoo kale kuu qorsheyn karnaa daabacaadda adiga.
Koob Gacmeed Xaashiyaha Xirmada ah
Koobka Kubadda Cuntada La Tuuri Karo (Scup Paper Soup Cup) waa koob la tuuro oo laga sameeyay warqad waxaana badanaa lagu dhajiyaa ama lagu dahaadhaa caag ama wax si looga ilaaliyo dareeraha inuu ka baxo ama ku qoydo warqadda.Waxaa laga yaabaa inay ka samaysan tahay warqad dib loo warshadeeyay oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. Waxaan ku siin karnaa cabir kala duwan 4oz ilaa 30oz koob. Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa daabacaadda midabka ama gramka walxaha. Maxaa kale, waxaan sidoo kale kuu qorsheyn karnaa daabacaadda adiga.
Warshadda Brown Kraft Paper Box
Warshaddan 'Brown Kraft Paper Box Factory' waxay soo xushay qalab tayo sare leh, qaab dhismeedku waa mid jilicsan oo jilicsan, jilicsan oo siman, si fiican u shaqeynaya, buundooyin badan. Farshaxanimo qaali ah, daaweynta geeska kaamil ah, qurux badan oo waara. Dareenka wanaagsan wuxuu ka dhigayaa sanduuqa hadiyadaha mid sifeysan.
Soo saare P Box Sanduuqa
Muuqaalka 8-aad ee Daabacan Pizza Box waa mid weyn, midabku wuu cad yahay, qaabku waa soo jiidasho, mana sahlana in la libdho. Dusha raaxada leh oo siman, xulashada wanaagsan ee warqadda jiingada, qalabka neefsashada, iyo naqshadeynta godka hawo qaadashada waxay hubineysaa in pizza uusan ka sii darin. Sanduuqa waa mid aad u adag oo adag, alaab ceeriin oo heer-cunto ah oo leh shahaado FSC, caafimaad iyo bey'adeed u fiican, oo la kulmi kara heerka FDA, aamin ah oo aan wasakh lahayn. Qaab-dhismeedka kala-baxa ayaa fududeynaya furitaanka iyo xiridda inta la isticmaalayo.
Jiingado Paper Fruit Box Soosaaraha
Sanduuqan Midhaha ah ee Khudradda Warqadda leh wuxuu leeyahay saddex lakab oo waraaqo jiingado qaro weyn leh, xoog leh oo waara. Hawo-mareennada ayaa loogu talagalay inay ka dhigaan badeecadda mid aan u nuglayn burburka. Daabacaad qaab naqshad leh, oo waafaqsan sawirka cambe, qurux iyo deeqsinimo leh, ayaa kor u qaada qiimaha wax soo saarka Xakamaynta ayaa macquul ku ah naqshadeynta, ma fududa in la jebiyo, oo ma dhaawaceyso gacanta. Sanduuqa waa mid aad u qaro weyn oo adag, alaabta ceeriin ee heerka cunnada oo leh shahaado FSC, caafimaad iyo bey'adeed u habboon, oo la kulmi kara heerka FDA, nabadgelyo iyo wasakheyn -free. Qaab-dhismeedka kala-baxa ayaa fududeynaya furitaanka iyo xiridda inta la isticmaalayo.